Chicken Gumbo Wing Rack 14 cheap car insurance Stainless simbi Roaster Mira With Drip tireyi For Smoker Grill Kana hovhoni, Dishwasher Safe, Non-Stick, Great For Bbq, Picnic
Darkelves Acrylic Bata Ho ...
Portable Hookah Set pamwe Pr ...
Hookah Set Micro Yemazuva Ano Tra ...
304 Stainless simbi Barbecu ...
32 padiki High Quality Wedzera ...
CHISIMBISO CHESIMBA CHAKAKONZESA HUKU GUMI RAKO RAKANAKA
Chicken gumbo Wing Rack 14 cheap car insurance Stainless simbi Roaster Mira With Drip tireyi For Smoker Grill Kana hovhoni, Dishwasher Safe, Non-Stick, Great For BBQ, Picnic.
Kicheni Zvishandiso / Barbecue Zvishandiso
Inotakurika Inotakurika Isina Simbi Yehuku Gumbo Rack
Chicken Gumbo Rack Saizi
35 * 11.5 * 14.3cm
Kubheka Pan Saizi
43.5 * 14.5 * 1.5cm
Inotakurika / Inotakurika / Nyore Kuchenesa / Isina mvura
Kunze / Bbq / Kicheni Kubika
Inotakurika / Inotakurika / Nyore Kuchenesa / Isina mvura / Yakasimba Kutakura Kugona / Isiri Nyore Kudonha / Anti-Scalding Bata
1. Ingorembera uye Usiye - Haufanire kunetseka nekuvashandura, iyi 12-slot huku dhiramu yekudyira grill ichaita yako makumbo ehuku nemapapiro zvakanyatso kubikwa pamativi ese zvakaenzana uye zvine muto kwazvo!
2. Yakakwana Saizi - Iyi huku yekudyira inokwana zvakakwana mune chero chiyero saizi hovhoni, griller, uye kuputa. Iyo ine saizi ye13.4 inches ne 6.5 inches.
3. No Flare Ups and Not Messy With Drip Tray - Iine pani pazasi peiyi gumbo girafu rack, hapana flare kumusoro pane iyo grill uye madonhwe ese akabatwa kumusoro, yakakwana nzira yekugadzira inonaka inonaka kana sosi.
4. Nyore Kuchenesa - Iyi huku mapapiro grill rack inogona kushambidzwa nyore nyore kuburikidza neyakawachira padhi. Kana zvichidikanwa, unogona zvakare kuinyudza mumvura nesipo yekugezesa ndiro kuitira nyore nyore kuchenesa. Inogona kupetwa zvakapetwa kuitira nyore kuchengetedza.
5. Yakasimba kwazvo uye yePrimiyamu Hunhu - Yakagadzirwa mune yepamusoro simbi isina simbi, iyi gumbo gumbo rinobatira grill, ovhoni, uye kuputa zvirokwazvo inomira yakanyanya tembiricha yekushandisa kwenguva refu kuti uwane mari yako!
Iyi yehuku drumstick inobata yegrill inogadzirwa kubva kune yemhando yepamusoro simbi isina simbi zvinhu uye gobvu simbi kuona kuti inogona kumira yakakwira tembiricha. Iyo zvakare inopera-isingagadzirike uye isingakanganise kuti iwe ugone kuishandisa kwenguva yakareba yenguva. Panguva imwecheteyo, isu tinoona kuti zvakachengeteka kushandisa chikafu.
Mushure mekushandisa, iwe unogona kungokanda iyi huku yekumisikidza yekucheka mudhishi yekuwachira pasina kutyora chero zvikamu zvacho. Kana zvichidikanwa, unogona kuinyudza pasi pemvura nesipo yekugezesa ndiro kuti unyorove charred yakasara pamusoro. Takambotaura here kuti inopetwa zvakare uye inogona kuchengetwa zvakaumbika? Hongu, kunze kwekuchenesa zvirinyore, zvakare zvakareruka kuchengeta pasina kutora yakawanda nzvimbo.
Pashure: Charcoal Mahwendefa Ezvinonhuhwirira Mwenje Mwenje Matafura Mahara Disk Mwenje 35 mm Resin Burner Rolls Pack ye 120 Mazimbe Briquettes Charcoal Burner Instant Moto Coal Tablet
Zvadaro: Darkelves Heat-Resistant Barbecue Zvishandiso Kicheni Zvinosunga Zvikafu Zvinosemesa-Yakakwira Simbi Simbi Bhengi Kubika Tongs Barbecue accessories
Premium Stainless Simbi Munyu Pepper mukuyi Adj ...
Darkelves Yakakwira-Yemhando Yakawedzerwa Flint Pfuti Ignit ...
Charcoal Chimney Starter Yakakura Saizi Wood Handle ...
Grill Brush Isipo Yakawedzera Strong BBQ Inosuka Sa ...
Electric Utsi Indoor Grills Barbecue Gridd ...
32 padiki High Quality Extendable Wooden Bata B ...